ICaledonia: itimu enhle ye-plasma KDE | Kusuka kuLinux
Malcer, umngani wethu kanye nomlawuli. kusuka kubhulogi enhle kakhulu I-Ext4, ushicilele enhle isihloko ukuze I-plasma ye-KDE lokho kuzoshiya abangaphezu koyedwa bethule.
Okulandelayo, uMalcer uqobo uchaza izici ezintsha zenguqulo yakamuva yeCaledonia ...
I-Caledonia, iyitimu yePlasma-KDE eqale njengemfoloko ye- "Ember". Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule i Inguqulo ye-0.7, ngokuthuthuka okuningi okuthuthukisa umphumela kimi. Futhi ngukuthi ingqikithi, ngokunengqondo, yenziwa ngokuya ngengikuthandayo nokusetshenziselwa okwami ​​uqobo, futhi ngenxa yalesi sizathu ifaka imibono ngayinye enginayo mayelana nokuthi kungenzeka yini ukuba netimu ephelele yedeskithophu ye-KDE ibe kimi .
Okokuqala, ingqikithi icindezelwe ngokuphelele kuzinto ze-SVGZ, ishiya ngemuva ama-SVG alula athatha isikhala esiningi ku-hard drive yethu. Iphaneli manje selimnyama futhi alibukeki kancane, futhi ngokuvamile umbala omnyama ompunga wenguqulo yangaphambilini ushiywe ukubheja kwi omnyama oyiqiniso ngokwengeziwe.
I-Los izithonjana ze-systray balahla lowomphumela wensimbi noma ocwebezelisiwe odume kakhulu ku-KDE ukuze ube okuthile bushelelezi futhi bushelelezi. Ngiphinde ngathola isithonjana se-Choqok (manje, ngombono wami, esibukeka senziwe isitayela futhi sisondelene ne-logo ye-Twitter), futhi sinezithonjana ezintsha zendawo yesaziso, i-Akregator, i-Kopete, ibhethri namadivayisi angaphandle. Ngokufanayo, kunezithonjana ezintsha ze-RSSNow ne-MicroBlogs plasmoids. Ukubuyekezwa kwemibala nakho kwenziwe.
Ukuqhubeka nama-plasmoid, amabha okuskrola noma imigoqo yokuskrola esingayibona kuma-applet afana ne- "Folder View" yintsha, futhi iqiniso ukuthi ushintsho ngomzuzu wokugcina, ngoba bengingahlosile ukuluthola ngokushesha okukhulu. Bengiklama ezinye ezifana ncamashi nalezi azibuka manje, kepha ngithathe lokhu kusuka kusihloko esithi "E-Plasma", futhi bekuyindlela ebengifuna ngayo. Ngakho-ke, Amabha wokuskrola manje asekuncane kakhulu futhi ngokwesitayela engifuna ukusinika sona.
Futhi ngokuvamile, bushelelezi bushelelezi futhi mnyama obushelelezi kunaphezulu. Vele udinga bona izithombe-skrini zohlobo olwedlule bese uziqhathanisa nezintsha futhi sizobona ukuthi ushintsho luphawuleka kakhulu.
Khumbula ukuthi ungayifaka ngokulanda iphakheji I-KDE-Bheka noma ngqo kusuka kuseluleki se-KDE ngale njongo kokuncamelayo kohlelo (Amasethingi Esistimu). Futhi ukusuka lapho unenketho yokuyibuyekeza uma usuvele usebenzisa izinhlobo zangaphambilini. Uma ngemuva kokuyifaka / ukuyivuselela ungakwazi ukubona njengoba kufanele, mhlawumbe kuyinkinga nge-Plasma cache, ngakho-ke kulula ukuqala kabusha iseshini yakho yomsebenzisi ukuze i-cache ilayishe kabusha kahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » ICaledonia: itimu enhle ye-plasma KDE
Isikhathi sekwedlule isikhathi xddd. Lesi sihloko bekuyiso ebengisanda kusithanda futhi ngisithanda impela
Ngiyabonga kakhulu ngokusabalalisa lolu daba! Ukubingelela. 😉
IKao dome kusho
Hawu! Kwenza ufune ukuthuthela ku-KDE haha.
Phendula uKao Dome
Simply enhle. Kufanele uyifakile yebo noma yebo.
Ngiyabonga ngesihloko esihle kangaka.
I-Dev / Null MalKaViaN Ⓥ (@DevNullDN) kusho
ifake futhi ibukeka imbi i-XD
Ngingayilungiselela kanjani ukuthi ibukeke njengezithombe-skrini?
Phendula ku-Dev / Null MalKaViaN @ (@DevNullDN)